ကြှနျမ ပွောငျးလဲလာတယျဆိုတဲ့ ခေါငျးစဥျတှပေဲ တပျတယျ – Shinyoon
ကြှနျမ ပွောငျးလဲလာတယျဆိုတဲ့ ခေါငျးစဥျတှပေဲ တပျတယျ
ကြှနျမ အရငျကလိုမဟုတျတော့ဘူးတဲ့ အရာရာပွောငျးလဲလာပွီလို့ ခေါငျးစဥျတပျကွတယျ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှကြေ ဘယျသူမှ မမေးကွဘူး ။ဟုတျပါတယျ ကြှနျမ အရငျလို မဟုတျတော့ဘူး . . .
ကိုယျ့အပျေါ အပျေါယံလေးပဲ ပေါငျးတတျတဲ့လူတှအေပျေါ ကြှနျမ အပျေါယံလေးပဲ ပွနျပွီး ဆကျဆံတတျနပွေီ ။လူ့အကွောငျးပေါငျးဖူးမှ သိတာတဲ့ ကွာကွာပေါငျးလေ မကောငျးမှနျးပိုသိလာလပေဲ မကောငျးမှနျးသိလို့ မပေါငျးပဲနလေိုကျတာပါ ပွောငျးလဲလာတာမဟုတျဘူး စိတျဓာတျမကောငျးလို့ ဝေးဝေးက ရှောငျလိုကျတဲ့သဘောပါပဲ
အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီးလဲ အရမျးကွီးမတှယျတာ မမြှျောလငျ့ထားမိတော့ဘူး အရမျးကွီးမခဈြပွတော့ဘူး အရငျကလို ဘယျသှားသှား ဘာလုပျလုပျ နရောတကာ ၀ငျဝငျမပါတော့ဘူး မခဈြတော့လို့မဟုတျဘူး အရငျတုနျးကလို မနာကငျြခငျြတော့တာပါ နဲနဲလေးဆငျခွငျလိုကျရုံပါ ကိုယျ့အားနညျးခကျြတှေ ဒဏျရာတှေ လူတကာကို လိုကျပွဖွဈတဲ့ အကငျြ့လဲ မရှိတော့ပါဘူး အရငျတုနျးကဆို ကိုယျထိခိုကျနာကငျြရတိုငျး ဖှငျ့ပွောလိုကျရမှ သကျတောငျ့သကျသာရှိသှားတတျတာလေ အဲ့လိုဖှငျ့ပွောလိုကျခွငျးက ပိုပွီးနာကငျြစရာကောငျးမှနျး တဖွေးဖွေးနားလညျသဘောပေါကျလာတာပါ လောကမှာ ဒဏျရာကိုဆေးကုပေးမယျ့ဆရာဝနျတှထေကျ ဆားဖွူးမယျ့လူတှေ ပိုမြားမှနျး သိလာတာပါ
အရငျတုနျးကလို ကိုယျဒုက်ခဖွဈတိုငျး ဘယျသူ့လကျကို ပွေးဆှဲရမလဲလို့ မတှေးတော့ဘူး ကိုယျလဲကသြှားတဲ့အခါ ကိုယျနာကငျြနရေတဲ့အခါ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ထူမပွီး ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ နှဈသိမျ့တတျနပေါပွီ လူတှေ ပွောကွသလို ကြှနျမပွောငျးလဲလာတယျဆိုတာထကျ နဲနဲလေးဆငျခွငျလိုကျရုံပါ အရာအားလုံးကို ရငျဘတျထဲ ထညျ့မထားတော့ဘူး ကိုယျ့ဘ၀အတှကျ တဈဖနျပွနျတှေးပွီးတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး နထေိုငျစပွုလာတာပါ
ကိုယျ့အတှကျအရေးမပါတဲ့လူတှကေို စိတျထဲ မထားတော့ဘူး အရာအားလုံးပွှတျသိပျထညျ့ထားတဲ့ နှလုံးသားက တဖွေးဖွေးပငျပနျးလာလို နဲနဲပါးပါး လှတျခတြတျလာတာပါကြှနျမ ပွောငျးလဲလာတယျဆိုတဲ့ ခေါငျးစဥျတှပေဲ တပျတယျ ဘာကွောငျ့လဲလို့ ဘယျသူမှ မေးခှနျးမထုတျကွဘူး သူတို့ကွောငျ့ဆိုတဲ့ အဖွကေို သူတို့ကိုယျတိုငျ သိနှငျ့ပွီးသားဖွဈနလေို့နမှောပါ နောကျဆုံးတော့ ကြှနျမ ပွောငျးလဲတတျခဲ့ပါပွီ ပွောငျးလဲနိုငျခဲ့ပါပွီ ။
ကျွန်မ အရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ အရာရာပြောင်းလဲလာပြီလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကျ ဘယ်သူမှ မမေးကြဘူး ။ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မ အရင်လို မဟုတ်တော့ဘူး . . .
ကိုယ့်အပေါ် အပေါ်ယံလေးပဲ ပေါင်းတတ်တဲ့လူတွေအပေါ် ကျွန်မ အပေါ်ယံလေးပဲ ပြန်ပြီး ဆက်ဆံတတ်နေပြီ ။လူ့အကြောင်းပေါင်းဖူးမှ သိတာတဲ့ ကြာကြာပေါင်းလေ မကောင်းမှန်းပိုသိလာလေပဲ မကောင်းမှန်းသိလို့ မပေါင်းပဲနေလိုက်တာပါ ပြောင်းလဲလာတာမဟုတ်ဘူး စိတ်ဓာတ်မကောင်းလို့ ဝေးဝေးက ရှောင်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ
အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ အရမ်းကြီးမတွယ်တာ မမျှော်လင့်ထားမိတော့ဘူး အရမ်းကြီးမချစ်ပြတော့ဘူး အရင်ကလို ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် နေရာတကာ ၀င်ဝင်မပါတော့ဘူး မချစ်တော့လို့မဟုတ်ဘူး အရင်တုန်းကလို မနာကျင်ချင်တော့တာပါ နဲနဲလေးဆင်ခြင်လိုက်ရုံပါ ကိုယ့်အားနည်းချက်တွေ ဒဏ်ရာတွေ လူတကာကို လိုက်ပြဖြစ်တဲ့ အကျင့်လဲ မရှိတော့ပါဘူး အရင်တုန်းကဆို ကိုယ်ထိခိုက်နာကျင်ရတိုင်း ဖွင့်ပြောလိုက်ရမှ သက်တောင့်သက်သာရှိသွားတတ်တာလေ အဲ့လိုဖွင့်ပြောလိုက်ခြင်းက ပိုပြီးနာကျင်စရာကောင်းမှန်း တဖြေးဖြေးနားလည်သဘောပေါက်လာတာပါ လောကမှာ ဒဏ်ရာကိုဆေးကုပေးမယ့်ဆရာဝန်တွေထက် ဆားဖြူးမယ့်လူတွေ ပိုများမှန်း သိလာတာပါ
အရင်တုန်းကလို ကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်တိုင်း ဘယ်သူ့လက်ကို ပြေးဆွဲရမလဲလို့ မတွေးတော့ဘူး ကိုယ်လဲကျသွားတဲ့အခါ ကိုယ်နာကျင်နေရတဲ့အခါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ထူမပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ နှစ်သိမ့်တတ်နေပါပြီ လူတွေ ပြောကြသလို ကျွန်မပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာထက် နဲနဲလေးဆင်ခြင်လိုက်ရုံပါ အရာအားလုံးကို ရင်ဘတ်ထဲ ထည့်မထားတော့ဘူး ကိုယ့်ဘ၀အတွက် တစ်ဖန်ပြန်တွေးပြီးတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး နေထိုင်စပြုလာတာပါ
ကိုယ့်အတွက်အရေးမပါတဲ့လူတွေကို စိတ်ထဲ မထားတော့ဘူး အရာအားလုံးပြွတ်သိပ်ထည့်ထားတဲ့ နှလုံးသားက တဖြေးဖြေးပင်ပန်းလာလို နဲနဲပါးပါး လွတ်ချတတ်လာတာပါကျွန်မ ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေပဲ တပ်တယ် ဘာကြောင့်လဲလို့ ဘယ်သူမှ မေးခွန်းမထုတ်ကြဘူး သူတို့ကြောင့်ဆိုတဲ့ အဖြေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် သိနှင့်ပြီးသားဖြစ်နေလို့နေမှာပါ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မ ပြောင်းလဲတတ်ခဲ့ပါပြီ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါပြီ ။